Curved Glass Cooker ပါးပျဉ်း, Cooker Hood ပေးသွင်းသူများ
103T60-T ကွေးပုံသဏ္glassာန်ဖန်ခွက်မြင့်စုတ်ယူခြင်းအကွာအဝေးပါးပျဉ်း 60cm မော်ဒယ်အမှတ်. 103T60-T Filter Filterless concept အပြီးသတ်အနက်ရောင်အမှုန့်ဖုံးအုပ်ရေနံစုဆောင်းသံမဏိလေစီးဆင်းမှု 850m3 / h မှို Blower Metal Blower မော်တာပါဝါ 180W အလိုအလျောက်သန့်ရှင်းသောအပူအလိုအလျောက်သန့်ရှင်းသောထိန်းချုပ်မှု ၃ မြန်နှုန်းအမူအယာထိန်းချုပ်မှုထုပ်ပိုးအရွယ်အစား (W *: D * H ကို) 655*565*510မီလီမီတာမီးခွက် 2x1.5W Loading QTY LED (20မိသားစုဆရာဝန် / 40HQ) 149/362ပီစီ ...
103L60-P နံရံပေါ်၌အကွာအဝေးရှိသောပါးလွှာသည့်ထွက်ပေါက်ရှိသောမီးခိုးထွက်ပေါက်ပုံစံမော်ဒယ်အမှတ်. 103L60-P Filter 2pcs baffle Filters များပြီးစီးခြင်း: အစွန်းခံသံမဏိ 430 ရေနံစုဆောင်းသံမဏိစီးဆင်းမှု 750m3 / h မှုတ်တံပလပ်စတစ်မှုတ်စက်မော်တော်အားဖြင့် 190W အလိုအလျောက်သန့်ရှင်းသည် / ထိန်းချုပ်ရန် 3-Speed ​​Push Button ကိုထုပ်ပိုးအရွယ်အစား (W *: D * H ကို) 635*405*545မီလီမီတာမီးခွက် 2x1.5W Loading QTY LED (20မိသားစုဆရာဝန် / 40HQ) 200/485ပီစီ ...
103B60-P နံရံပေါ်ရှိအကွာအဝေးပါးလွှာသောကွေးပုံသဏ္glassာန်ဖန်တည်းထားသောဖန် ၆၀ စင်တီမီတာမော်ဒယ်အမှတ်. 103B60-P Filter 1pc baffle Filter ပြီးစီးသောသံမဏိဖြစ်သည် 430 ရေနံစုဆောင်း / လေစီးကြောင်း 450m3 / h / 750m3 / h မှို Blower Plastic Blower Motor 65W / 190W အလိုအလျောက်သန့်ရှင်းသည် / ထိန်းချုပ်ရန် 3-Speed ​​Push Button ကိုထုပ်ပိုးအရွယ်အစား (W *: D * H ကို) 640*380*455မီလီမီတာမီးခွက် 2x1.5W Loading QTY LED (20မိသားစုဆရာဝန် / 40HQ)…
103T90-T ကွေးပုံသဏ္glassာန်ဖန်ခွက်အနက်ရောင်အမှုန့်ဖုံးအုပ်အကွာအဝေးပါးပျဉ်း 90cm မော်ဒယ်အမှတ်. 103T90-T Filter Filterless concept အပြီးသတ်အနက်ရောင်အမှုန့်ဖုံးအုပ်ရေနံစုဆောင်းသံမဏိလေစီးဆင်းမှု 850m3 / h မှို Blower Metal Blower မော်တာပါဝါ 180W အလိုအလျောက်သန့်ရှင်းသောအပူအလိုအလျောက်သန့်ရှင်းသောထိန်းချုပ်မှု ၃ မြန်နှုန်းအမူအယာထိန်းချုပ်မှုထုပ်ပိုးအရွယ်အစား (W *: D * H ကို) 945*580*505မီလီမီတာမီးခွက် 2x1.5W Loading QTY LED (20မိသားစုဆရာဝန် / 40HQ)…
103KB60-P ကွေးဖန်2အလွှာ cone ပုံသဏ္bာန် baffle filter ကိုအကွာအဝေးပါးပျဉ်း 60cm
103KB60-P ကွေးဖန်2အလွှာ cone ပုံသဏ္affာန် baffle filter ကိုအကွာအဝေးပါးပျဉ်း 60cm မော်ဒယ်အမှတ်. 103KB60-P Filter အလွှာနှစ်ထပ်ကိန်းပုံစံ baffle filter ပြီးစီးသော Stainless Steel 430 ရေနံစုဆောင်းသူ PC Airflow 850m3 / h မှို Blower Metal Blower မော်တာပါဝါ 180W အလိုအလျောက်သန့်ရှင်းသောအပူအလိုအလျောက် - သန့်ရှင်းသောထိန်းချုပ်မှု ၃ မြန်နှုန်းထိထိန်းချုပ်မှုထုပ်ပိုးအရွယ်အစား (W *: D * H ကို) 645*570*520မီလီမီတာမီးခွက် LED 2x1.5W Loading QTY …
103KB90-P ကွေးဖန်ခွက်ပုံသဏ္affာန် baffle filter range သည် 90cm
103KB90-P ကွေးဖန်ခွက်ပုံသဏ္bာန် baffle filter range အကွာအဝေး 90cm Model No. 103KB90-P Filter အလွှာနှစ်ထပ်ကိန်းပုံစံ baffle filter ပြီးစီးခြင်း Stainless Steel 430 ရေနံစုဆောင်းသူ PC Airflow 850m3 / h မှို Blower Metal Blower မော်တာပါဝါ 180W အလိုအလျောက်သန့်ရှင်းသောအပူအလိုအလျောက် - သန့်ရှင်းသောထိန်းချုပ်မှု ၃ မြန်နှုန်းထိထိန်းချုပ်မှုထုပ်ပိုးအရွယ်အစား (W *: D * H ကို) 940*625*430*520မီလီမီတာမီးခွက် 2x1.5W Loading QTY LED (20မိသားစုဆရာဝန် / 40HQ) 133/331ပီစီ ...
103X60-T ကန့်လန့်ကာဖန်ခွက်ပါသောအကွာအဝေး ၆၀ စင်တီမီတာ
103X60-T ကန့်လန့်ကာဖန်ခေါက်ပိတ်နေသော filter အကွာအဝေး ၆၀ စင်တီမီတာမော်ဒယ်အမှတ်. 103X60-T Filter Baffle filter အပြီးသတ်သံမဏိပြုလုပ်သည် 430 ရေနံစုဆောင်းသူ PC Airflow 700m3 / h မှုတ်တံ Blower Metal Blower မော်တာပါဝါ 140W အလိုအလျောက်သန့်ရှင်းသောအပူအလိုအလျောက်သန့်ရှင်းသောထိန်းချုပ်မှု ၃ မြန်နှုန်းအမူအယာထိန်းချုပ်မှုထုပ်ပိုးအရွယ်အစား (W *: D * H ကို) 660*540*550မီလီမီတာမီးခွက် 2x1.5W Loading QTY LED (20မိသားစုဆရာဝန် / 40HQ) 140/360pcs Delivery & ဝန်ဆောင်မှုအချိန်မီပေးပို့ခြင်း
103U60-T ကွေးပုံကသံမဏိနှင့်ဖန်ထည်အကွာအဝေး ၆၀ စင်တီမီတာ
103U60-T ကွေးပုံသဏ္steelာန်သံမဏိနှင့်သံလိုက်ဖန်အကွာအဝေးပါးလွှာ 60cm မော်ဒယ်အမှတ်. 103U60-T Filter Baffle filter အပြီးသတ်သံမဏိပြုလုပ်သည် 430 ရေနံစုဆောင်းသူ PC Airflow 700m3 / h မှုတ်တံ Blower Metal Blower မော်တာပါဝါ 140W အလိုအလျောက်သန့်ရှင်းသောအပူအလိုအလျောက်သန့်ရှင်းသောထိန်းချုပ်မှု ၃ မြန်နှုန်းအမူအယာထိန်းချုပ်မှုထုပ်ပိုးအရွယ်အစား (W *: D * H ကို) 660*540*550မီလီမီတာမီးခွက် 2x1.5W Loading QTY LED (20မိသားစုဆရာဝန် / 40HQ) 140/360pcs Delivery &…
103F60-T ကွေးပုံသဏ္glassာန်ဖန်ထည်မြင့်စုတ်ယူခြင်းအကွာအဝေး ၆၀ စင်တီမီတာ
103F60-T ကွေးပုံသဏ္glassာန်ဖန်ထည်မြင့်မြင့်စုတ်ယူခြင်းအကွာအဝေးပါးပျဉ်း 60cm မော်ဒယ်အမှတ်. 103F60-T က Filter2pcs baffle filter အပြီးသတ်သံမဏိပစ္စည်း 201 ရေနံစုဆောင်းသူ PC Airflow 850m3 / h မှို Blower Metal Blower မော်တာပါဝါ 180W အလိုအလျောက်သန့်ရှင်းသောအပူအလိုအလျောက် - သန့်ရှင်းသောထိန်းချုပ်မှု ၃ မြန်နှုန်းထိထိန်းချုပ်မှုထုပ်ပိုးအရွယ်အစား (W *: D * H ကို) 645*590*570မီလီမီတာမီးခွက် 2x1.5W Loading QTY LED (20မိသားစုဆရာဝန် / 40HQ) 127/317pcs Delivery …
103F90-T ကွေးပုံသဏ္glassာန်ဖန်ထည်မြင့်မြင့်စုတ်ယူခြင်းအကွာအဝေးပါးပျဉ်း 90cm
103F90-T ကွေးပုံသဏ္glassာန်ဖန်ခွက်မြင့်စုတ်ယူခြင်းအကွာအဝေးပါးပျဉ်း 90cm မော်ဒယ်အမှတ်. 103F90-T က Filter2pcs baffle filter အပြီးသတ်သံမဏိပစ္စည်း 201 ရေနံစုဆောင်းသူ PC Airflow 850m3 / h မှို Blower Metal Blower မော်တာပါဝါ 180W အလိုအလျောက်သန့်ရှင်းသောအပူအလိုအလျောက် - သန့်ရှင်းသောထိန်းချုပ်မှု ၃ မြန်နှုန်းထိထိန်းချုပ်မှုထုပ်ပိုးအရွယ်အစား (W *: D * H ကို) 912*567*520မီလီမီတာမီးခွက် 2x1.5W Loading QTY LED (20မိသားစုဆရာဝန် / 40HQ) 103/256pcs Delivery …
103Q60-T ကွေးပုံသဏ္glassာန်ဖန်ထည်မြင့်စုတ်ယူခြင်းအကွာအဝေး ၆၀ စင်တီမီတာ
103Q60-T ကွေးပုံသဏ္glassာန်ဖန်ထည်သည်မြင့်မားသောစုပ်ယူမှုအကွာအဝေး ၆၀ စင်တီမီတာမော်ဒယ်အမှတ်. 103Q60-T Filter Baffle filter အပြီးသတ်သံမဏိပြုလုပ်သည် 201 ရေနံစုဆောင်းသူ PC Airflow 850m3 / h မှို Blower Metal Blower မော်တာပါဝါ 180W အလိုအလျောက်သန့်ရှင်းသောအပူအလိုအလျောက် - သန့်ရှင်းသောထိန်းချုပ်မှု ၃ မြန်နှုန်းထိထိန်းချုပ်မှုထုပ်ပိုးအရွယ်အစား (W *: D * H ကို) 645*590*570မီလီမီတာမီးခွက် 2x1.5W Loading QTY LED (20မိသားစုဆရာဝန် / 40HQ) 127/317pcs Delivery & ဝန်ဆောင်မှု…
103L90-P နံရံပေါ်ရှိအကွာအဝေးပါးလွှာသည့်အိတ်ဇောပေါက်ပေါက်ပုံစံမော်ဒယ်အမှတ်. 103L90-P Filter 2pcs baffle Filters များပြီးစီးခြင်း: အစွန်းခံသံမဏိ 430 ရေနံစုဆောင်းသံမဏိစီးဆင်းမှု 750m3 / h မှုတ်တံပလပ်စတစ်မှုတ်စက်မော်တော်အားဖြင့် 190W အလိုအလျောက်သန့်ရှင်းသည် / ထိန်းချုပ်ရန် 3-Speed ​​Push Button ကိုထုပ်ပိုးအရွယ်အစား (W *: D * H ကို) 955*460*573မီလီမီတာမီးခွက် 2x1.5W Loading QTY LED (20မိသားစုဆရာဝန် / 40HQ) 110/270ပီစီ ...